တိုက်ခန်း, တိုင်းပြည်အိမ်သူအိမ်သားသို့မဟုတ်အိမ်တွင်းတစ်ခုချင်းစီပိုင်ရှင်အိမ်ရဲ့ဒီဇိုင်းကိုခေတ်မီခြင်းနှင့် functional ဖြစ်စေ, အလှဆုံး, မူရင်းခဲ့ကြောင်းသေချာစေရန်တတ်နိုင်သမျှအရာအားလုံးလုပ်ဖို့ကြိုးစားနေသည်။ ဤရှုပ်ထွေးအဖြစ်မှန်မခညျြးနှီးဆှေးနှေးရှိပါတယ် - တိုင်းအသေးစိတ်ဂရုတစိုက်တစ်ဦးဆိုနိုင်ပါတယ်နှင့်ပြည့်စုံအတွင်းပိုင်းကိုဖန်တီးရန်ရွေးချယ်တယ်။ ဒါဟာအားလုံးရန်အရေးကြီးပါသည် - တစ်ခါတစ်ရံတွင်ကျွန်ုပ်တို့ထင်ထက်အများကြီးပိုအရေးကြီးတဲ့အခန်းကဏ္ဍ၏ဒီဇိုင်းကိုကစားရာထညျ့ trinkets မှဝေါလ်ပေပါနှင့်ကုလားကာများ၏မှန်ကန်သောရွေးချယ်မှု။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဆောင်းပါးသင်ဖျော်ဖြေကြလိမ့်မည်မသာ, ဒါပေမယ့်လည်းဧည့်သည်များအံ့သြဖို့သောအိမ်တော်အဘို့အတွင်းပိုင်း၏မူလဘာသာရပ်များမှမြှုပ်နှံနေသည်။
ဗီရို, စင်ပေါ်, ကုလားထိုင်, စားပွဲ, ဟင်းလျာများ, အဝတ်လျှော် ... Boring ။ သင်တို့၏သက်သာခြင်းနှင့်ပျော်မွေ့သောဘို့အလိုငှါမဆုပ်အနစ်အလုပ်လုပ်သောသူဒီဇိုင်နာများ၏မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်စိတ်ကူးစိတ်သန်းကိုကူညီပတ်ဝန်းကျင်မစိုးရိမျ။ မီးဖိုချောင်များသောအားဖြင့်မိသားစုစားရန်ကြွလာရာနေရာတစ်ခုအဖြစ်စျေးကွက်ဖြစ်ပါတယ်။ သင့်အိမ်ထောင်စုတန်ဆာပုံမှန်မဟုတ်သောမျိုးစိတ်အံ့သြ။ မူရင်းခွက်ကိုသို့မဟုတ်ပန်းကန်မခက်ခဲသည်ကိုဝယ် - တစ်ဦးချင်းစီစတိုးဆိုင်တန်ဆာများတွင်အများဆုံးတောင်းဆိုမှုများဖောက်သည်များအတွက်အနည်းငယ်အရာလည်းမရှိ။ ဒါ့အပြင်ပုံမှန်မဟုတ်သောပုံသဏ္ဍာန်တစ်ခုစုပ်သို့မဟုတ်စင်ပေါ်မဝယ်သင်လုပ်နိုင်သည်, ဗေဒအရသာများ၏မူရင်းဆန္ဒပြခဲ့ကြသည်။
အိပ်ခန်းထဲမှာကျနော်တို့ထိုနေ့၏တတိယသုံးဖြုန်း, အချို့ပျင်းရိခြင်းနှင့်ရှည်လျားသောဖြစ်ကြောင်း, ဒါကြောင့်သင်အတွင်းပိုင်းအလှဆင်ဖို့, ဒါပေမယ့်လည်းအပန်းဖြေဖို့အထောက်အကူတစ်ဦးအေးဆေးတည်ငြိမ်လေထုကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့သာအစေခံမယ်လို့ပစ္စည်းရွေးချယ်ခြင်းကိုအထူးအာရုံစိုက်သင့်ပါတယ်။ စိတ်ထဲမှကြွလာသောပထမဦးဆုံးအရာ - ကအလင်းရောင် (မီးခွက်နှင့် luminaires) နှင့်ရနံ့ဖယောင်းတိုင်ပါပဲ။ ခေတ်သစ်ဒီဇိုင်နာများဆိုအတွင်းပိုင်းစတိုင်နှင့်အတူရောနှောနေခြင်းနိုငျသောဖယောင်းတိုင်, မီးခွက်နှင့်မီးခွက်၏ကြီးမားသောရွေးချယ်ရေးဆက်ကပ်။
အတုပန်းပွင့်နှင့်အတူကြမ်းပြင်ပန်းအိုးတစ်ဦးအခမဲ့ထောင့်တွင်ထား, သင်ရောင်စုံအလှဆင်သဲနှင့်အတူလှပသောပုံစံမျိုးစုံ၏အိုးများ၏ပွင့်လင်းစင်ပေါ်အပေါ်ဖြန့်, ရုပ်ဆင်းသဏ္ဌာန်မီးတူပါလိမ့်မယ်တဲ့မီးဖိုကို install လုပ်နိုင်ပါတယ်သို့မဟုတ် - လူနေမှုတိုက်ခန်းကိုအလှဆင်ဖို့မူလအတွင်းပိုင်းပစ္စည်းများကို၏ရွေးချယ်မှုအတွက်တီထွင်ဖန်တီးမှုများအတွက်ကြီးမားတဲ့နယ်ပယ်ကပါဝင်ပတ်သက် ဒီဇိုင်းမြို့ရိုးကိုနာရီချိတ်ဆွဲထားတယ်။ မရှိတင်းကျပ်သောစည်းမျဉ်းများနေသမျှကာလပတ်လုံးအရာအဖြစ်ဖြစ်ကြသည်နှင့်သင်ကြိုက်နှစ်သက်ဒီဇိုင်းကအလေးထားပြောကြားခဲ့သည်။
ရေချိုးခန်းအဘို့အလှဆင်ရော်ဘာ duck မသာရှိနိုင်ပါသည်။ အထူးကုနေ့တိုင်းအိမ်မှာပုံစံမျိုးများအတွက်မူရင်းဒီဇိုင်နာပစ္စည်းကိုဖန်တီးရန်စိတ်ကူးများ generate ။ အထူးသဖြင့်လူကြိုက်များတစ် washcloth နှင့်ဆပ်ပြာတစ်ပုလင်း, ဒါပေမယ့်စာအုပ်သို့မဟုတ်စပျစ်ရည်ကိုတစ်ဖန်မသာထားနိုင်သည့်ရေချိုးခန်း, များအတွက်စင်ပေါ်ဖြစ်ကြသည်။
သငျသညျသူ့ကိုတူသောထင်ဖို့ရာအရပျကလေးအတွက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုရွှေ့ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကလေးတစ်ဦးရဲ့အခန်းက Decorating, သင့်စိတ်ကူးစိတ်သန်း၏တစ်ဦးအခြို့သောအားထုတ်မှုလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ ဆွေမျိုးသားချင်းများနှင့်မိတ်ဆွေများ, သူငယ်ကစားစရာတွေအများကြီးပေးပါ။ ဤအရာအလုံးစုံဝက်ဝံရုပ်ဖို့, Bunny မရှိဟုဆို၏ရန်တိုက်ခန်းပတ်လည်၌အိပ်လျက်ရှိကြဘူး, ကုလားထိုင်သို့မဟုတ်ဆိုဖာအဘို့အ upholstery သူတို့ထဲကပါစေ။ သင်တို့သည်လည်းကာတွန်းဇာတ်ကောင်ပုံစံယနေ့သားသမီးရဲ့ကုလားထိုင်များတွင်လူကြိုက်များ ထား. , ဆယ်ကျော်သက်များအတွက်နိုင်ပါတယ်ပိုပြီးပျော်စရာ option ကိုလိုအပ်တယ် - ထိုသို့သောဟမ်ဘာဂါ၏ပုံစံအတွက်တစ်ဦးဆိုဖာအဖြစ်။
အများအားဖြင့်တစ်ဦးဝင်ပေါက် - တစ်ကျစ်လစ်သိပ်သည်းအာကာသဒါဆက်စပ်ပစ္စည်းတစ်ခုအဆင်တန်ဆာ, ဒါပေမယ့်လက်တွေ့ကျတဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာလုပ်ဆောင်တဲ့အရာသာဖြစ်သင့်သည်။ စင်္ကြံထဲမှာအနည်းငယ်အရာ, သင်ဖိနပ်အဘို့အင်္ကျီချိတ်သို့မဟုတ်စင်ပေါ်စမ်းသပ်နိုင်ပါသည်။
ကကျဉ်းကျုတ်တိုက်ခန်းအတွက်ငြီးငွေ့စရာဘဝကနေအာရုံနှင့်လတ်ဆတ်သောလေထုထဲတွင်အပန်းဖြေနိုင်သောကြောင့်တိုင်းပြည်အိမ်သူအိမ်သားကောင်းလှ၏။ သင်၏မျက်စိအဘို့အသာယာသောခဲ့နေဖို့, အိမ်နှင့်ဥယျာဉ်များအတွက်အလှဆင်ဂရုစိုက် - ကမူလဥယျာဉ်ကိုပရိဘောဂသို့မဟုတ်ပုံမှန်မဟုတ်သောပန်းပွင့်အိုးဥယျာဉ်တော်ရှိနိုင်ပါသည်။
Provence ရဲ့ style အတွက်အိပ်ခန်းများအတွက် wallpaper
မျက်နှာကျက် battens fix လုပ်ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
ကော်ဇော tile ကို
အဆိုပါအနုပညာရှင်သက်မဲ့အရာဝတ္ထုအားမိမိမျက်စိ glues နှင့်ကထွက်လာသောအရာကိုပဲ!
Sierra de las Quijadas အမျိုးသားဥယျာဉ်
ယေရှဲ Williams ဟာ Sean Penn များ၏ဟောင်းရည်းစားနှင့်တွေ့ဆုံခဲ့သည်
Astigmatism - ကုသမှု
Lupita Nyong'o သစ်ကို Grazia မဂ္ဂဇင်းကသူ၏ပါဝင်မှုနှင့်အတူဖုံးလွှမ်း retouched အကြီးအကျယ်ဒေါသထွက်စေ
နဖူးပေါ်ဘရောင်းအစက်အပြောက် - အကြောင်းတရားများ
ဆီမီးခွက် Ball ကို
ကော်ပိုရိတ်ပါတီများ 2015 စားဆင်ယင်